नेतृत्वमा फर्किन खाेज्दै पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र, हेर्नुहाेस् के के भने ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेतृत्वमा फर्किन खाेज्दै पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र, हेर्नुहाेस् के के भने ?
नेतृत्वमा फर्किन खाेज्दै पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र, हेर्नुहाेस् के के भने ?
उहाँले देशको परिस्थिति र समय आएको बताए पनि आफूले नेतृत्व लिनका निम्ति सबै जनताले चाहनुपर्ने भने दोहोर्याए। ‘देशको परिस्थिति र समय आएको छ, म फेरि दोहोर्याउछु तर, सबैले चाहनु पर्दछ’, उहाँले थप्नुभयो । उहाँले मुलुकको परिस्थति अत्यन्त चिन्ताजनक रहेको बताउँदै आफू सक्रिय हुने सक्ने संकेत गरेका हुन् । ‘देशको परिस्थिति अन्त्यन्तै ना’जुक अवस्थामा छ’, उहाँलेले देशको चिन्ता व्यक्त गर्दै बताउनुभयो ।
राजनीतिक नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उहाँले वर्तमान नेतृत्वलाई कागजको फूलमा सुवास खोज्ने आरोप पनि लगाउनुभयो। ‘अहिले परिस्थिति कस्तो छ भनेदेखिन्, दुबो, मखमली र गोदावली फूलको मालाको महत्व नबुझ्ने तर, कागजको फूलको सुवास खोज्ने, त्यो परिस्थितिमा हामी हिडिराखेको जस्तो लाग्छ मलाई’, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भने, ‘नेतृत्व नभा जस्तो देखिएको छ।’
उहाँले आफू नेतृत्व लिन तयार भएको र त्यसका लागि जनताले साथ दिनुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो। ‘सबै जनताको इच्छा हुनुपर्छ र यो कुरा गर्दा फेरि सक्रिय भयो भन्ने कुरा निस्केला। यो सक्रिय हुने र नहुने बेला होइन’, उनले भने, ‘देशको परिस्थितिले मागेको समय आए जस्तो लाग्छ। तर, म फेरि दोहोर्याउछु सबैले यो चाहना गर्नुपर्छ ।
कोभिड- १९ का बिरामीले अस्पताल भर्ना हुनुअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने
नेपालमै संभव कोरोनाको औषधि, होम आइसोलेशनमै यसरी निको भयो कोरोना, अवस्य पढ्नुहाेस
कोरोना त्रास : आवत-जावत रोक्न पुल नै भत्काइयो
रक्षा, गृह र स्वास्थ्यमन्त्रीको कोरोना परीक्षण नतिजा नेगेटिभ